नाइकी जुत्ता मन पराउनेहरुका लागी !  HamroKatha
नाइकी जुत्ता मन पराउनेहरुका लागी !
नाइकी भन्ने बित्तिकै हामी यसको लोगोबाट चिन्छौं । यो लोगोको अर्थ हो, तिब्र गतिबाट निस्किएको आवाज ।
हाम्रो कथा २०७६ असार १९ गते १६:०६
तस्विर श्रोत : complex.com
तपाईले नाइकी कम्पनीको जुत्ता लगाउनु भएको छ या लगाउन मन छ ? यदि त्यसो हो भने यसको कथा थाहा पाई राखौं।
२४ फेब्रुअरि १९३८ मा जन्मिएका फिलिप ह्याम्सन नाइट अमेरिकी विजनेज सर्कलमा चर्चित नाम हो । उनी नै नाइकी कम्पनीका सञ्चालक तथा जन्मदाता हुन् । उनी विश्वको २८ औं धनि व्यक्ति हुन् । जसको कुल सम्पत्ति २६.२ विलियन अमेरिकि डलर रहेको छ ।
युनिभर्सिटि अफ ओरेगनबाट पत्रकारितामा ग्रयाजुएट गरेका नाइट पछि स्टानफोर्ड स्कुल अफ विजनेसमा भर्ना भए । जहाँ उनले आफुमा उद्यमी चरित्र भएको थाहा पाए । त्यहाँबाट विजनेस एड्मिनिस्ट्रेसनमा स्नातकोत्तर गरेपछि उनले स्पोर्ट रनिङ सुजको उत्पादन गर्ने सोच लिए । र जापान उडे । कारण त्यसबखत् अमेरिकामा जापनिज जुत्ताको निकै व्यापार चर्चा हुन्थ्यो ।
त्यतिवेला टाइगर ब्राण्डको जुत्ता निकै चल्तीमा थियो । मुल्य न्यून तर क्वालिटी उत्कृष्ट । यो देखेर यसका मालिकलाई भेट्ने अनि यसको ब्यापार गर्ने सोचाई राखे फिलिपले । तर टाइगरका मालिकलाई भेट्न त्यति सजिलो थिएन । त्यसैले अमेरिकि डिस्ट्रिब्युटरको छद्मभेषि परिचय भिरेर त्यस जुत्ताको अमेरिकामा आयात गर्ने सेटिङ पनि मिलाए ।
यसपछि १९६४ मा जन्मियो ब्लु रिवन स्पोर्टस् । पहिलो वर्ष झण्डै तीन हजार डलरको कारोवार भयो । उनी कारमा जुत्ता राखेर खेलमैदानसम्मै पुगेर जुत्ता विक्रि गर्थे । समय बित्दै गयो अनुभव भरिदैं गयो । यसै बिचमा उनीहरुले एयर पकेट राखेर जुत्तालाई अझ आरामदायि बनाउने सोच लिए । र यसरी जुत्ताको बनावटमा क्रान्ति छायो । र पछि ब्लु रिवन स्पोर्टस् नाइकेमा परिवर्तन भयो । ग्रीक देवताको नामबाट सापटि लिइएको नाइकी नामको वास्तविक अर्थ विजय भन्ने लाग्छ ।
सन् १९७२ मा २.३ मिलियन बराबरको जुत्ता विक्रि गरे पछि नाइकीले कहिल्यै फर्केर हेर्नु परेन । त्यसपछि त हरेक वर्ष उसको कमाई दोव्वर हुँदै गयो । सन् १९८० मा नाइकीले एडिडासको बजारलाई उछिन्यो र फिलिप नाइट सबैभन्दा धनि मध्यका व्यक्ति कहलिए ।
उनी धनी मात्र होईनन् दानी पनि छन् । उनले एक अमेरिकि विजनेस स्कुलमा १ सय ५ मिलियन अमेरिकि डलर र एक क्यान्सर अस्पताललाई एक सय मिलियन अमेरिकि डलर दान गरेका थिए । विद्यालय क्षेत्र सुधारका लागी भनेर ६५ हजार अमेरिकि डलर पनि उनले सहयोग गरिसकेका छन् ।
तस्विर श्रोत : Nike News
नाइकी भन्ने बित्तिकै हामी यसको लोगोबाट चिन्छौं । यो लोगोको अर्थ हो, तिब्र गतिबाट निस्किएको आवाज । नाइकीले यसबाट आफ्नो हिम्मत र कार्यक्षमतालाई चित्रण गरेको छ । साथै फेसन र फङसन (उपयोगीता) दुबैमा नाइकी अब्बल छ भनेर यस चिह्नको प्रयोग गरिएको हो ।